के तपाइ कुइना र घुडाकाे कालाेपन हटाउन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय - ज्ञानविज्ञान
बाँकी छालाको तुलनामा कुइना र घुडाको छाला बढी कडा हुन्छ, त्यसैले पनि बढी कालो हुन्छ । घुडा र कुइनाको कालोपनलाई साबुनले घोटेर हटाउँने प्रयास गर्नुभयो भने केही फरकपनको महसुस हुँदैन ।यी भागको कालोपनालाई हटाउँन यस्ता सजिला टिप्स अपनाउँनुहोस् ।
केही दिनमै काखी,कुइना,गर्धन अथवा शरीरमा देखिएको कालोपना हटाउने उपाय ! जानी राखौ
त्यसपछि आधाचम्चा भन्दा कम बेकिंग सोडा उकत दुध र कागतीमा राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग पिट्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले उक्त दुधलाई करिब २० मिनेट छोडिदिनुहोस्।
–दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ ।
–कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ ।
–दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास डुबाई अनुहारमा बिस्तारै दल्ने र केही समय त्यसै छोडेर सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ ।
–घ्यूकुमारीमा छालासम्बन्धी अनेक समस्या समाधान गर्ने गुण हुन्छ । यसका लागि अनुहारमा घ्यूकुमारी दलेर सुक्न दिई धुने गर्नुपर्छ । यसले छालालाई म्वइस्चराइज गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
–बदामलाई रातभरि भिजाउने र बिहान उठी यसको पेस्ट बनाई यसमा चन्दनको पाउडर मिसाएर बनाएको पेस्ट अनुहारमा दल्ने गर्नाले अनुहारका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छन् ।
–आलुलाई स्लाइस पारी काट्ने । यसलाई दाग भएको ठाउँमा दली सुक्न दिने र मनतातो पानीले धुने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ ।
–आलुको पेस्ट बनाई यसमा मह मिसाएर अनुहारमा दली केही समय त्यसै छोडेर धुने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँछ ।
–बेसारमा काँचो दूध र कागतीको रस मिसाई दाग भएको ठाउँमा लगाएर केही मिनेट त्यसै छोडी मनतातो पानीले पखाल्नुपर्छ ।
–प्याजको रसले कटनको टुक्रा भिजाई दाग भएको ठाउँमा दल्ने र केही समयपछि धुने गर्नुपर्छ । साथै, एक चम्चा प्याजको रसमा दुई चम्चा मह मिसाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ ।
–भुइँकटहरको जुसमा कपास डुबाई अनुहारमा दल्ने र २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ ।
–ओखरलाई कुटेर त्यसमा दही र केही थोपा बदामको तेल हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले छालामा चमक ल्याउँछ ।
–तपाईंको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् । यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ ।
–हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ ।
–केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ ।
–गोलभेँडा, कागती र अन्डाको प्याक लगाउनाले डन्डीफोर, कालो धब्बा हट्नुका साथै छालामा चमक पनि आउँछ ।
–गोलभेँडा, कागती र महको प्याक लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ ।
–घामले डढेर कालो भएको छालामा काँचो दूधले मसाज गर्दा फाइदा हुन्छ ।
–खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ ।
–काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ ।
—एक चम्चा नुनमा आधा चम्चा खाने सोडा र एक चम्चा मह राखेर घोल्ने र त्यसले अनुहारमा मसाज गर्ने यसबाट पनि अनुहारको छालामा चमक आउँछ ।
कुइनो र घुडामा काला दागहरु छन्, हटाउन यी उपायहरु अपनाउनुहोस्
प्राय मानिसहरुको घुडाँ र कुहिनोमा कालोपन हुनेगर्छ । जति साबुनको प्रयोग गरेपनि कालोपन जाने गर्दैन । कतिपय अवस्थामा यसले साथीहरुको माझ समस्या पनि उत्पन्न गराउने गर्छ । यदी तपाईको पनि कुहिनो र घुडाँमा कालोपन छ र यसबाट छुटकारा पाउन चाहानुहुन्छ भने केही घरेलु उपाय अपनाउन सक्नुहुनेछ ।
बेकिङ सोडा स्किनलाई सफा गर्नुको साथै शरिरमा रहेको कालोपनलाई समेत हटाउन मदत गर्छ । यसलाई दुध मिलाएर लगाउँदा फाइदा साबित हुन्छ ।
२. बेसार, मह र दुध
यी चीजहरुको प्रयोग गरेर पनि कालोपन हटाउन सकिन्छ । महले ड्राई स्किनको मश्च्वराइज राख्ने काम गर्छ । यी तीन चीजहरु बराबरी मात्रा लिएर यसको पेस्ट कुहिनो र घुडाँमा लगाउन सकिन्छ ।
३. चिनी र ओलिभ ओइल
चिनीले छालालाई एक्सफोलिएट गर्ने काम गर्छ । ओलिभ ओएलले त्यसलाई मोस्चराइज गर्ने काम गर्छ ।
४. कागती र मह
कागतीले प्राकृतिक ब्लीचको काम गर्छ । त्यस्तै महले डार्कनेस हटाउने काम गर्छ । लगातार हप्ताभरि प्रयोग गर्नाले केही फरक पाएको अनुभव गर्नुहुनेछ ।
५. बेसन र कागती
बेसनले छालालाई भित्र देखिनै सफा गर्ने काम गर्छ भने कागतीले ब्लीचको काम गर्छ । डार्कनेशलाई हटाउने काम गर्छन् ।
Don't Miss it दिनभर हाइ आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् कारण जान्नुहाेस्
Up Next कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउने गर्नु हुन्छ ? पिएकाे एक घन्टा पछि शरिरमा के हुन्छ ? जान्नुहाेस्